Ka Shaqeynta Guriga | Ebuno
Nagu saabsan blog
Ku biir Ebuno oo bilow inaad lacag ku kasbato sahanno la bixiyay!
Ka shaqeynta guriga oo leh sahanno lacag leh
La shaqeynta xogururinta lacag bixinta ah ee internetka waa shaqo fudud oo aad sameyn karto markii waqti dheeri ah kuu haray. Waad sameyn kartaa sahaminta meelkasta inta aad kaheleyso internetka. Waxaad ku jiifsan kartaa sariirta oo aad ka jawaabi kartaa su'aalaha, waxaad ku fadhiisan kartaa baska ama runtii meel walba iyo wakhti kasta.
Maxaad ula shaqeynaysaa sahanno lacag leh?
Maxay fiicantahay in lala shaqeeyo sahanno la bixiyo khadka tooska ah? Hagaag, maxaa yeelay waa shaqo aad u fudud oo deggan oo aad ku kasban karto dinaar dheeraad ah oo dheeri ah si deg deg ah. Adiga ayaa go’aaminaya goorta aad rabto inaad la baxdo lacagtaada iyo inta aad rabto inaad la baxdo. Way ku habboon tahay ardayda! Kuma filna inaad kasbato dakhli buuxa sahaminta laakiin waa taageero dhammaystiran oo dheeri ah. Isticmaalaha firfircoon ee Ebuno wuxuu si fudud ku kasban karaa 1500 karoon bishii isagoo isticmaalaya 10-30 daqiiqo maalintii.
Sidee loo helaa lacagta?
Waad kala noqon kartaa lacagta aad kasbato ilaa PayPal iyo PayPal, way fududahay inaad lacag ka bixis ku sameyso koontadaada bangiga waxayna qaadataa maalmo kooban. Mustaqbalka, waxaan sidoo kale awood u yeelan karnaa inaan ku maareyno lacag bixinta siyaabo badan sida Swish, tusaale ahaan si aan ugu fududeyno adeegsadeyaashayada. Waxay qaadan kartaa ilaa 1 toddobaad in lacagtaada la helo, laakiin badiyaa waan ka dheereynnaa taas.
Siyaabo badan oo looga shaqeeyo guriga
Marka lagu daro baaritaanada lacagta la bixiyo, waxaa jira qaabab badan oo guriga looga shaqeyn karo. Tusaale ahaan, waad iibin kartaa sawirada, shaqooyin yar yar ka qaban kartaa boggaga sida fiverr iyo khadka tooska ah ee tooska ah ee internetka oo leh shay aad isleedahay madadaalo.
Dad badan ayaa wadada u fuula si ay u bilaabaan boggooda gaarka ah, taas oo ah hab kale oo ku fiican shaqada khadka tooska ah. Kadib waxaad wax ka qoreysaa wax aad u maleyneyso inay xiiso leeyihiin ka dibna ku dheji boorar xayeysiis ah boggaaga. Haddii aadan aqoon sida loo furo balooggaaga, waxaan kugula talin karaa inaad isticmaasho wix ama weebly. Haddii aad waxoogaa ka sii horumarsan tahay, waad iibsan kartaa boggaaga oo aad isticmaali kartaa WordPress.
Dooro LanguageEnglishCarabiChinese (La fududeeyay)FaransiiskaJarmalHindiTalyaaniJapanPortugalRuushSpainCibraanigaArmenia
Ebuno waa shirkad sharci ah kana socota Stockholm Sweden
Shuruudaha Adeegga & Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Made la gudaha Stockholm © 2020 Ebuno AB